Screen Computer Record la Screen Computer taariikhqorihii
> Resource > Record > Toosane in ay ku qoraan Videos of Computer Screen
Marka aad leedahay dhibaato ah oo ka hawlgala codsiyada cusub ama nidaamyada, iyo wax fikrad ah sida loo qeexo waxa dhacay on your computer, waxaad u baahan kartaa aalad si ay u qoraan shaashadda kombiyuutarka, oo u soo dir Galliani computer ama nin farsamo taageero caawimaad. Waxa loo baahan yahay in si dhab ah ay u muujiyaan wixii aad ku samaysay on your computer iyo siday waxan ku dhaceen, si ay shaqaalaha farsamada aad fahmi karto fiican oo aad ku siin xal deg deg ah daqiiqo gudahood. In in, aad u baahan tahay si aad ugu qortid hawlaha onscreen sida file video ah.
Waqtigaas, taariikhqorihii screen sida a DemoCreator waa waxa aad u baahan tahay. Sidaa daraadeed, waxaad si fudud u qoraan shaashadda kombuyuutarka aad muraayad oo dhan hawlgalladiina kaliya 3 tallaabo . Halkan waxaan ku arki doonaa sida ay u qoraan shaashadda computer la software awood badan taasi weli si sahlan loo isticmaalo.
1 Calan doorasho lagu duubo iyo aad u bilowdo
Ka dib markii socda DemoCreator, guji New Record . Dooranaysaa meel duubo adigoo jiiday iyo dhaqaaqin ka laydi cagaaran . Sidoo kale, waxaad bedeli kartaa in hab duubo shaashad buuxda sida ay baahidaada.
Next, dhigay hab duubo. Waxaa jira 3 fursadaha aad u:
Motion Full : qoraan dhammaan isbeddellada shaashadda.
Sawir laga qaaday shaashadda : qabsadaan hawlaha ku-screen ku salaysan qasabno mouse iyo, keyboard.
Buugga : qaadan Screenshot adigoo riixaya F7 halka qoro.
Ka dib markii Run ahaantii, bilowdid duubo iyo saxaafadda F10 loo joojin marka aad duubo waa in ka badan.
2 Edit bogagga aad duubo (Ikhtiyaar)
Haddii aad u baahan tahay, ku dar Sheeko, qoritaan, sawirada, interactivities iyo xitaa animations si ay u sameeyaan duubay more cad iyo is-dhexgal. Tusaale ahaan, waxaad ku dari kartaa dar Flash Animation by Flash button gujinaya iyo dooran Flash animation in menu.
Haddii aad rabto in ay xoogga saaraan qaar ka mid ah waxyaabaha muhiim ah, isagoo intaa ku daray saamayn Zoom waa lagama maarmaan. Si aad u samayn, u tag Home tab ka dibna riix badhanka Zoom ah, aad arki doonaa meel casaan jir taas oo la Asakrtii doonaa. Next, astaysto booska, baaxadda iyo mudada qaab dhismeedka zoom soo xulay.
3 naadiya sida qaabka aad jeceshahay
Software waxa uu ku siinayaa qaabab wax soo saarka serveral aad u. Waxaad sidoo kale daabici karo rikoorka shaashadda sida video ah oo qaab kala duwan oo ay ka mid yihiin Jabbuuti, AVI, MP4, MOV, iwm ama email si ay shaqaalaha farsamada si toos ah. Waxaad la doortay oo dhan!
Si aad si fiican u fahmaan tallaabooyinka kor ku xusan, waxaad ka arki kartaa this video demo abuuray by DemoCreator . Guji ka Screen icon Full on bar play si aad u eegto video ee shaashad buuxda.
Waxaad arki, waa wax sahlan si ay u qoraan shaashadda computer la DemoCreator. Hadda waxaa isku dayi iskaa!